Suxufiyiinta waa in la ilaaliyaa
Suxufiyiintu waxay si firfircoon oo joogto ah u soo bandhigaan dhaqdhaqaaqyada iyo dhaqamada, oo ay ku jiraan khiyaanooyinka dawladda iyo musuqmaasuqa, ee curyaamiya oo dilaaya hay'adaha dimuqraadiga ah.
Waxay la socodsiiyaan dadweynaha mrka ay sidaas sameeyaan, waxayna ilaalinayaan daacadnimada dawladda iyo kuwa saamaynta leh.
Dadaal lagu xakameynayo qulqulka wararka iyo baabi'inta baahinta wararka aan wanaagsaneyn ama xasaasiga ah, jilayaasha dowliga ah iyo wakiilada aan dawliga ahayn ee madaxda iyo dowladaha kalitaliska ah.
Ololeyaal baahsan oo inta badan axmaqnimo ayaa la bilaabay si loo aamusiyo warbaahinta madaxa banaan. Saxafiyiinta, tifaftirayaasha, madbacadaha, iyo shaqaalaha kale ee warbaahinta waa la dhibaateeyay, lagu aflagaadeeyay eedaymo been abuur ah, la xiray, jirdil loo geystay - iyo xitaa la dilay.
Sida laga soo xigtay suxufiyiinta aan xuduuda lahayn, ku dhawaad 1,100 saxafi ayaa la dilay tobankii sano ee la soo dhaafay. Tan iyo bilowgii sanadkan, 26 wariye iyo labo ka mid ah shaqaalaha warbaahinta ayaa la dilay. 460 wariye iyo 18 ka mid ah shaqaalaha warbaahinta ayaa sidoo kale la xiray.
"Maraykanku waxa uu si qoto dheer uga walaacsan yahay dhibaataynta saxafiyiinta meelo badan oo caalamka ah," ayay tiri wakiilka Maraykanka ee golaha dhaqaalaha iyo bulshada ee Qaramada Midoobay Lisa Carty. Sannadkan, xaaladaha badbaadada iyo shaqada ee suxufiyiinta ku sugan gudaha Ruushka iyo qaybo ka mid ah Ukraine oo uu Ruushku xukumo ayaa weli ah dhibaato gaar ah.
Ugu yaraan todobo saxafi ayaa la dilay iyagoo tabinayay dagaalka aan loo meel dayin ee uu Ruushka ku qaaday Ukraine. tirooyinka ayaa ah kaliya cirifka barafka waxayna muujinayaan cabsida ay dawladda Ruushka ka qabto inay si daacad ah uga warbixiso dagaalkeeda."
Danjire Carti oo ka hadlaysay kulanka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ee looga hadlayay ilaalinta suxufiyiinta ayaa sheegtay in “Haweenka saxafada ay si aan loo meel dayin ay u saameeyaan hanjabaadaha iyo weerarada, kuwaas oo inta badan ah dabeecad galmo iyo jinsi marka loo eego hanjabaadaha ragga dhigooda ah oo si isa soo taraya u dhaca. online . . . .
"Maraykanku waxa uu dhaleeceynayaa dhammaan hanjabaadaha, cagajuglaynta, iyo xadgudubyada ka dhanka ah saxafiyiinta iyo shaqaalaha warbaahinta."
"Saxaafad xor ah oo madax-bannaani waxay lagama maarmaan u tahay dimuqraadiyadda waxayna door muhiim ah ka ciyaartaa isweydaarsiga xorta ah ee macluumaadka iyo fikradaha, la dagaallanka musuqmaasuqa, iyo ka dhigista dawladda mid hufan oo lala xisaabtami karo," ayuu yiri danjire Karti. "Waa in aan wariye loo geysan caga-jugleyn, caga-jugleyn iyo gacan-ka-hadal uu ku guda jiro shaqadiisa." ayay sii raacisay Lisa Carty.
Tani waxay aheyd faallo ka turjumeysa aragtida dowladda Mareykanka.